သင့်အတွေးအခေါ်ထက်မြက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Learning English From Great Ideas - Myanmar Network
သင့်အတွေးအခေါ်ထက်မြက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Learning English From Great Ideas
Posted by Learner on November 29, 2013 at 1:36 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လူတွေမှားလေ့ရှိတဲ့ မိုက်မဲတဲ့ ထင်မြင်ယူဆမှုအမှားတော်ပုံအမျိုးမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် သင်ဟာ သူတကာထက် ထက်မြက်တဲ့ ညဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်
ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ယခုပြောပြမဲ့ ရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းအချို့က သင့်ကို အမှားအားလုံးကနေကင်းစင်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ဆင်ခြင်မဲ့တဲ့ အယူအဆအမှားမျိုးတွေ
ပြဿနာဟာ ကြည့်ရူလေ့လာလိုက်မှ ပြေလည်သွားမှာဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်ဘဲ သွားရောက်ကြည့်ရူလေ့လာလိုက်ပါ။ အရစ်စ်တိုတယ် ဟာ တကယ်လို့များ သူ့ဇနီးရဲ့
ခံတွင်းကိုဟ ခိုင်းပြီးလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် သွားအရေအတွက်နည်းတယ်လို့ယူဆမိတဲ့ အမှားမျိုးကို လုပ်မိခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့သူက ဒီအချက်လက်ကို သူသိပြီးသားလို့ ထင်နေလို့ အဲလိုမလေ့လာခဲ့မိဘူး။ တကယ်မသိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်ထင်နေတာခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး
သို့သော်လည်း အလွယ်တကူလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ သွားရောက်လေ့လာလို့ မရနိူင်တဲ့ ကိစ္စ၊ ပြဿနာများစွာရှိနေပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အငြင်းအခုံအဖြစ်
ရဆုံး ပြဿနာတွေဟာ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ သက်သေအထောက်ထားကောင်းကောင်း မရှိကြတာများပါတယ်။ အဲလိုအခြေနေမျိုးမှာ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ဘက်လိုက်မှုအစွဲတွေ
ကို ဆင်ခြင်မိအောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ သင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တစ်ခုက သင့်ကို ဒေါသဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ရဲ့ရပ်တည်ယူဆချက်မှာ
လည်း ခိုင်လုံတဲ့သက်သေကောင်းမရှိဘူးလို့ သင့်ရဲ့မသိစိတ်က သတိပြုမိနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို နှစ်အပေါင်းနှစ်ဟာ
ငါးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလာခဲ့ရင် တကယ်လို့သင်ဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရင် သူ့ရဲ့အဆိုပြုချက်က သင့်ကို ဒေါသဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆန့်ကျင်
ဘက်အမြင်၊ အယူဆတစ်ခုက သင့်ကို ဒေါသဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်၊ သတိထားပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆဟာလည်း သက်သေ
အထောက်ထားတွေထက် ကျော်လွန် နေဖို့အလားလာရှိပါတယ်။
တရားသေဆန်တဲ့ တွေးမြင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကနေကင်းဝေးစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကတော့ သင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ကွဲပြားနေသူတွေရဲ့အတွေးအမြင်၊ အယူဆတွေကိုသတိပြုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ သဘောထားမကိုက်ညီတဲ့လူတွေနဲ့ပြောကြည့်ပါ။ သင် မထောက်ခံတဲ့ ပါတီက သတင်းစာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ လူတွေနဲ့ သတင်းစာထဲက အယူအဆတွေကို သင်ဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တယ်၊ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်၊ ဆိုးဝါးတယ်လို့ထင်မယ်ဆိုရင် သင့်အတွေးအမြင်တွေဟာလည်း သူတို့အတွက် ဒီအတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ သိထားပါ။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆမှု ကို ညီမျှမှန်ကန်အောင် ထိန်းကျောင်းပေး ပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကတော့ သင့်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအမြင်၊ယုံကြည်မှု ရှိမဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးကြည့်ပြီးငြင်းခုံကြည့်ပါ။
မဟတ္တမ ဂန္ဒီကြီးဟာ စက်ပစ္စည်းတွေ၊ ရထားတွေ၊ စက်တပ် သဘောင်္တွေ ပေါ်လာတာကို မနှစ်မြို့ဘူးတဲ့။ သူက စက်မှုတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးကိုတောင် ဖြစ်နိုင်ရင်
မဖြစ်ပေါ်လာအောင်တားလိုက်ချင်သတဲ့။ ဒီခေတ် မှာ လူတိုင်းက ခေတ်မှီနည်းပညာတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို လက်ခံနေကြပြီ ဖြစ်လို့ ဂန္ဒီကြီးလို အမြင်ရှိတဲ့သူကို
သင့်အနေနဲ့တွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အများလက်ခံထားတဲ့ အမြင်ဟာ တကယ်ဘဲမှန်ရဲ့လားလို့ သင်စမ်းသပ်တွေးခေါ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂန္ဒီကြီး
ချေပပြောဆိုလာမဲ့ အဆိုပြုမှုတွေကို စိတ်ကူးကြည့်ပြီး ပြန်လည်ငြင်းခုံကြည့်ပါ။ အဲဒီလို စိတ်ကူးနဲ့ ငြင်းခုံကြည့်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို တခါတရံ
ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ တရားသေတွေးခေါ်ပြီး မျက်စိမှိတ်ငြင်းခုံမဲ့ အဖြစ်မျိုးကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးပ ပင့်မြှောက်တတ်တဲ့ တွေးခေါ်ပုံကိုလည်း သတိထားရပါ့မယ်။ သင်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်အရပ်မှာနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ရဲ့ကိုယ်
ပိုင် မိခင်နိုင်ငံဟာ အခြားနိုင်ငံတွေထက် သာတယ်လို့ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန် ချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ သူအတွက်ကတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ
ကောင်းကွက်၊ ဆိုးကွက်တွေ ဒွန်တွဲရှိနေတာဖြစ်လို့ ဒီလိုအကောင်းဆုံးလို့ ယတိပြတ်ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ၀န်ခံပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ စိတ် ခံစားမှုတင်မက ပါဘူး အခြားစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေကလည်း အတွေးအမြင်မှောက်မှားခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီထဲမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်စရာရှိတာကတော့ "အကြောက်တရား'' ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောက်တရားကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ၊ သေခြင်းတရားကိုကြောက်တာ
သေချာမသိရလို့ကြောက်တာ၊ ပြီးတော့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို သိုဝှက်ထားရာကနေ ဘာကိုကြောက်မှန်းမသိကြောက်နေတတ်တာ စသည်ဖြင့်များလှပါတယ်။
အကြောက်တရားဟာ မျက်ကန်းယုံကြည်စွဲလမ်းခြင်းရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး "ရက်စက်ခြင်း" "လူမဆန်ခြင်း" ရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ အကြောက်တရားတစ်ခု လွှမ်းမိုးခံထားရပြီဆိုရင် ဘယ်လူသား ဘယ်နိုင်ငံမှ အကြောင်းအကျိုးညီးညွတ်အောင် စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်မယ်၊ ကြင်ကြင်နာနာ
ပြုမှုမယ်လို့ ယုံစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့အကြောက်တရားတွေကို သင့်ကိုယ်သင် ၀န်ခံပြီး အဲဒီအကြောက်တရားတွေကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်မှု မလုပ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံး
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ၊ ပြဿနာတွေမှာ သင်ဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောက်တရားကို အောင်နိုင်ခြင်းဟာ ညဏ်ပညာရဲ့အစပျိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။
(Bertrand Russell ၏ How to Sharpen Your Judgement ကိုဆီလျော်အောင်ပြန်ဆို၏။)
ကဲဗျာ ဒီတစ်ခါတော့ ခွင့်လွတ်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ...
ကျနော် ဒီမှာ ထည့်ဖို့ ၀က်ပေ့ ကနေကော်ပီကူးလို့ မရတော့လို့ မူရင်းဆောင်းပါးကို
အောက်မှာ လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သွားရောက်ဖတ်လိုက်ပါတော့...။
တစ်ခု သတိပြုရမှာက အဲဒီထဲမှာ အချို့ စာသားတွေမှားနေတယ်ခင်ဗျ။
ဒီဆောင်းပါးကလေးကို ကျနော်က ရီးဒါး ဒိုင်ဂျက်အဟောင်းတစ်အုပ်မှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာ။
ခုအင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ တွေ့တာနဲ့ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ အတွေးနက်ရင်း ....အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ကြပါစေ....
Permalink Reply by venus on November 29, 2013 at 15:30
Permalink Reply by CHIT THU on November 30, 2013 at 23:08
Permalink Reply by Saytan on December 1, 2013 at 4:49
"How to sharpen your judgement" Bertrand Russell
To avoid the various foolish opinions to which mankind is prone, no superhuman genius is required. A few simple rules will keep you, not from all error, but from silly error. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mrs. Aristotle to open her mouth. He did not do so because he thought he knew. Thinking that you know when in fact you don’t isafatal mistake, to which we are all prone.
Many matters, however, are not easily brought to the test of experience .The most savage controversies, indeed, are those about matters as to which there is no good evidence either way. In suchacase, you can make yourself aware of your own bias. If an opinion contrary to your own makes you angry, that isasign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. If someone maintains that two and two are five, unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. So whenever you find yourself getting angry aboutadifference of opinion, be on your guard; you will probably find, on examination, that your belief is going beyond what the evidence warrants. A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in circles different from your own. If you cannot travel, seek out people with whom you disagree, and readanewspaper belonging toaparty that is yours. If the people and the newspaper seem mad, perverse and wicked remind yourself that you seem so to them. This reflection should generateacertain caution.
Another good plan is to try imagining an argument withaperson havingadifferent bias. Mahatma Gandhi deplored railways and steamboats and machinery; he would have liked to undo the whole of the industrial revolution. You may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, because in western countries most people take the advantage of modern techniques for granted. But if you want to make sure that you are right in agreeing with prevailing opinion, test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation. I have sometimes been led to change my mind asaresult of this kind of imaginary dialogue, and short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure. Be wary of opinions that flatter your self-esteem. We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nations is superior to all others. Seeing that each nation has its characteristic merits and demerits the rational man will admit that the question is one to which there is no demonstrably right answer.
Other emotions beside self-esteem are common sources of error; of these perhaps the most important is fear. Fear has many forms-fear of death, fear of the unknown, and that vague generalized fear that comes to those who conceal from themselves their more specific terrors. Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. In the Punic wars, when the Romans won victories the Carthaginians became persuaded that their misfortunes were due toacertain laxity which had crept into the worship of Moloch. Molach liked having children sacrificed to him and preferred them aristocratic; but the noble families of Carthage had adopted the practice of surreptitiously substituting plebeian children for their own offspring. This, it was thought, had displeased the God. And so, at the worst moments, even the most aristocratic children were duly consumed in the fire. Strange to say, the Romans were victorious in spite of this democratic reform on the part of their enemies. Neitheraman noranation can be trusted to act humanely or to think sanely under the influence of great fear. Until you have admitted your own fears to yourself, and have guarded yourself byadifficult effort of will against their myth-making power, you cannot hope to think truly about many matters of great importance. To conquer fear is the beginning of wisdom.
Permalink Reply by Learner on December 1, 2013 at 8:42
Whatagreat kindness of yours , friend!
I do appreciate your help . Though your name is Satan yet your work is god-like !